राष्ट्रियसभामा कसको कति सीट ? यस्ताे निस्कियो हिसाब निगरानी -
काठमाडौं । एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुने भएपछि काँग्रेसले ७ प्रदेशबाट छनौट हुने कुल ५६ सिटमध्ये ११ सिट प्राप्त गर्ने निश्चित देखिएको छ । एमाले—माओवादीले ३७ सिट र राजपा—फोरमले ५ सिट प्राप्त गर्ने निश्चित हुँदा बाँकी ३ सिट कसले प्राप्त गर्ने भन्ने निर्धारण साना दलहरुको अंकगणितले निर्धारण गर्ने भएको छ ।
स्थानीय तह र प्रादेशिक निर्वाचनको अन्तिम नतिजाका अाधारमा यस्तो आँकडा निस्किएको हो । निर्वाचनमा ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी १५०६ जना स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्रतिव्यक्ति १८ मतभार तथा प्रदेशसभाका ५५० जना सांसदहरुको प्रतिव्यक्ति ४८ मतभार सहित कुल २ हजार ५६ जना प्रतिनिधिले कुल ५३ हजार ५ सय ८ मत हाल्नेछन् ।
कुन प्रदेशबाट कस्तो नतिजा ?
प्रदेश १ : प्रदेश नं १ मा कुल १३७ स्थानीय तहबाट मेयर र उपमेयर गरी २७४ जना आउनेछन् । उनीहरुको प्रतिव्यक्ति मतभार १८ हुँदा स्थानीय प्रतिनिधिबाट कुल ४९ सय ३२ मत आउनेछ । त्यस्तै प्रत्यक्ष ५६ र समानुपातिक ३७ जना गरी कुल ९३ जना प्रादेशिक सांसदबाट प्रतिव्यक्ति ४८ को दरमा कुल ४४६४ मत आउँदा जम्मा मत ९३९६ हुन्छ । त्यसमध्ये एमाले माओवादीको कुल ६२१० काँग्रेसको २६२८ र अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारको ५५८ मत आउनेछ । राष्ट्रिय सभामा पठाउने कुल ८ सदस्यमध्ये २ जना बहुमतीय पद्दतिबाट छानिने भएकोले काँग्रेसको प्रतिनिधि त्यहाँबाट आउने छैनन् । तर एकल संक्रमणीयबाट छान्ने ६ जनामध्ये एमाले माओवादीले ४ जना र काँग्रेसले २ जना सदस्य पठाउन पाउनेछन् । अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले जसलाई समर्थन गरे पनि नतिजामा परिवर्तन हुनेछैन । यसरी वाम गठबन्धनबाट ६ जना र काँग्रेसबाट २ जना प्रतिनिधि आउनेछन् ।
प्रदेश २ : प्रदेश नं २ मा कुल १३६ स्थानीय तहबाट मेयर र उपमेयर गरी २७२ जना आउनेछन् । उनीहरुको प्रतिव्यक्ति मतभार १८ हुँदा स्थानीय प्रतिनिधिबाट कुल ४८ सय ९६ मत आउनेछ । त्यस्तै प्रत्यक्ष ६४ र समानुपातिक ४३ जना गरी कुल १०७ जना प्रादेशिक सांसदबाट प्रतिव्यक्ति ४८ को दरमा कुल ५१३६ मत आउँदा जम्मा मत १००३२ हुन्छ । त्यसमध्ये राजपा फोरमको ४४८२, एमाले माओवादीको कुल ३०३० काँग्रेसको २३७० र अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारको १५० मत आउनेछ । २ जना बहुमतीय पद्दतीबाट छानिने अवस्थामा त्यहाँ फोरम—राजपा कै पल्लाभारी हुन्छ । तर एकल संक्रमणीयबाट छान्ने ६ जनामध्ये फोरम—राजपाले ३ जना, एमाले माओवादीले २ जना र काँग्रेसले १ जना सदस्य पठाउन पाउँछन् । यो प्रदेशमा पनि अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले जसलाई समर्थन गरे पनि नतिजामा परिवर्तन हुनेछैन । यसरी फोरम—राजपाका ५ जना, वाम गठबन्धनबाट २ जना र काँग्रेसबाट १ जना प्रतिनिधि आउनेछन् ।
प्रदेश ३ : प्रदेश नं ३ मा कुल ११९ स्थानीय तहबाट मेयर र उपमेयर गरी २३८ जना आउनेछन् । उनीहरुको प्रतिव्यक्ति मतभार १८ हुँदा स्थानीय प्रतिनिधिबाट कुल ४२८४ मत आउनेछ । त्यस्तै प्रत्यक्ष ६६ र समानुपातिक ४४ जना गरी कुल ११० जना प्रादेशिक सांसदबाट प्रतिव्यक्ति ४८ को दरमा कुल ५२८० मत आउँदा जम्मा मत ९५६४ हुन्छ । त्यसमध्ये एमाले माओवादीको कुल ६८७६, काँग्रेसको २२१४ र अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारको ४७४ मत आउनेछ । राष्ट्रिय सभामा पठाउने कुल ८ सदस्यमध्ये बहुमतीय पद्दतिबाट छानिने २ जना एमाले माओवादीकै सांसद हुनेछन् । तर एकल संक्रमणीयबाट छान्ने ६ जनामध्ये एमाले माओवादीले ४ जना र काँग्रेसले १ जना सदस्य पठाउन पाउनेछन् । अन्य १ जना भने साना दलहरुले समर्थन गर्ने दलले प्राप्त गर्नेछन् । यसरी प्रदेश नं ३ मा वाम गठबन्धनबाट ६ वा ७ जना र काँग्रेसबाट १ वा २ जना प्रतिनिधि आउनेछन् ।
प्रदेश ४ : प्रदेश नं ४ मा कुल ८५ स्थानीय तहबाट मेयर र उपमेयर गरी १७० जना आउनेछन् । उनीहरुको प्रतिव्यक्ति मतभार १८ हुँदा स्थानीय प्रतिनिधिबाट कुल ३०६० मत आउनेछ । त्यस्तै प्रत्यक्ष ३६ र समानुपातिक २४ जना गरी कुल ६० जना प्रादेशिक सांसदबाट प्रतिव्यक्ति ४८ को दरमा कुल २८८० मत आउँदा जम्मा मत ५९४० हुन्छ । त्यसमध्ये एमाले माओवादीको कुल ३३३०, काँग्रेसको २१९६ र अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारको ४१४ मत आउनेछ । राष्ट्रिय सभामा पठाउने कुल ८ सदस्यमध्ये बहुमतीय पद्दतिबाट छानिने २ जना एमाले माओवादीकै सांसद हुनेछन् । तर एकल संक्रमणीयबाट छान्ने ६ जनामध्ये एमाले माओवादीले ३ जना र काँग्रेसले २ जना सदस्य पठाउन पाउनेछन् । अन्य १ जना भने साना दलहरुले समर्थन गर्ने दलले प्राप्त गर्नेछन् । यसरी प्रदेश नं ४ मा वाम गठबन्धनबाट ५ वा ६ जना र काँग्रेसबाट २ वा ३ जना प्रतिनिधि आउनेछन् ।
प्रदेश ५ : प्रदेश नं ५ मा कुल १०९ स्थानीय तहबाट मेयर र उपमेयर गरी २१८ जना आउनेछन् । उनीहरुको प्रतिव्यक्ति मतभार १८ हुँदा स्थानीय प्रतिनिधिबाट कुल ३९२४ मत आउनेछ । त्यस्तै प्रत्यक्ष ५२ र समानुपातिक ३५ जना गरी कुल ८७ जना प्रादेशिक सांसदबाट प्रतिव्यक्ति ४८ को दरमा कुल ४१७६ मत आउँदा जम्मा मत ८१०० हुन्छ । त्यसमध्ये एमाले माओवादीको कुल ५२८६, काँग्रेसको २१०० र अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारको ७१४ मत आउनेछ । राष्ट्रिय सभामा पठाउने कुल ८ सदस्यमध्ये बहुमतीय पद्दतिबाट छानिने २ जना एमाले माओवादीकै सांसद हुनेछन् । तर एकल संक्रमणीयबाट छान्ने ६ जनामध्ये एमाले माओवादीले ४ जना र काँग्रेसले २ जना सदस्य पठाउन पाउनेछन् । यसरी प्रदेश नं ५ मा वाम गठबन्धनबाट ६ जना र काँग्रेसबाट २ जना प्रतिनिधि आउनेछन् ।
प्रदेश ६ : प्रदेश नं ६ मा कुल ७९ स्थानीय तहबाट मेयर र उपमेयर गरी १५८ जना आउनेछन् । उनीहरुको प्रतिव्यक्ति मतभार १८ हुँदा स्थानीय प्रतिनिधिबाट कुल ३८४४ मत आउनेछ । त्यस्तै प्रत्यक्ष २४ र समानुपातिक १६ जना गरी कुल ४० जना प्रादेशिक सांसदबाट प्रतिव्यक्ति ४८ को दरमा कुल १९२० मत आउँदा जम्मा मत ४७६४ हुन्छ । त्यसमध्ये एमाले माओवादीको कुल ३५२८, काँग्रेसको १०६२ र अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारको १७४ मत आउनेछ । राष्ट्रिय सभामा पठाउने कुल ८ सदस्यमध्ये बहुमतीय पद्दतिबाट छानिने २ जना एमाले माओवादीकै सांसद हुनेछन् । तर एकल संक्रमणीयबाट छान्ने ६ जनामध्ये एमाले माओवादीले ४ जना र काँग्रेसले १ जना सदस्य पठाउन पाउनेछन् । अन्य १ जना भने साना दलहरुले समर्थन गर्ने दलले प्राप्त गर्नेछन् । यसरी प्रदेश नं ४ मा वाम गठबन्धनबाट ६ वा ७ जना र काँग्रेसबाट १ वा २ जना प्रतिनिधि आउनेछन् ।
प्रदेश ७ : प्रदेश नं ७ मा कुल ८८ स्थानीय तहबाट मेयर र उपमेयर गरी १७६ जना आउनेछन् । उनीहरुको प्रतिव्यक्ति मतभार १८ हुँदा स्थानीय प्रतिनिधिबाट कुल ३१६८ मत आउनेछ । त्यस्तै प्रत्यक्ष ३२ र समानुपातिक २१ जना गरी कुल ५३ जना प्रादेशिक सांसदबाट प्रतिव्यक्ति ४८ को दरमा कुल २५४४ मत आउँदा जम्मा मत ५७१२ हुन्छ । त्यसमध्ये एमाले माओवादीको कुल ३७०८, काँग्रेसको १८७२ र अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारको १३२ मत आउनेछ । राष्ट्रिय सभामा पठाउने कुल ८ सदस्यमध्ये बहुमतीय पद्दतिबाट छानिने २ जना एमाले माओवादीकै सांसद हुनेछन् । तर एकल संक्रमणीयबाट छान्ने ६ जनामध्ये एमाले माओवादीले ४ जना र काँग्रेसले २ जना सदस्य पठाउन पाउनेछन् । यसरी प्रदेश नं ७ मा वाम गठबन्धनबाट ६ जना र काँग्रेसबाट २ जना प्रतिनिधि आउनेछन् ।
यसरी ७ ओटा प्रदेशबाट एमाले माओवादीबाट कम्तीमा ३७ जना, काँग्रेसबाट कम्तीमा ११ जना तथा मधेशी दुई दल राजपा र फोरमबाट ५ जना प्रतिनिधिहरु निश्चित हुनेछन् । बाँकी ३ जना भने साना दलहरुको हातमा छ । प्रदेश नं ३ मा विवेकशील साझा, राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक, नयाँ शक्ति लगायतका दलहरु रहेको अवस्थामा उनीहरुको समर्थन काँग्रेसलाई हुने सम्भावना देखिन्छ । त्यस्तै, प्रदेश नं ४ मा दिपक मनाङे, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतकाको समर्थन एमाले माहोवादी गठबन्धनलाई हुने हुँदा त्यहाँ गठबन्धनकै पल्लाभारी देखिन्छ । प्रदेश नं ६ मा राप्रपा निर्णायक हुने भएकोले काँग्रेसको १ सिट थप हुनसक्छ । हेर्नुहाेस् गणना तालिका
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अायोग
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) ले केन्द्रीय कार्य समितिको वैठक...